Amazon dia tsy ny fivarotana an-tserasera lehibe indrindra manerantany. Izy io koa dia tontolon'ny Smart Home goavambe izay hilazanao ny Alexa control! Araho aminay izay hataon'ity mpanampy hendry indrindra eto an-tany ity.
Amazon Alexa, Vaovao
Amazon mifehy ny mpamily amin'ny faharanitan-tsaina
ai, Amazon, tsaina
Nanapa-kevitra i Amazon fa hanomboka hanara-maso ireo mpamiliny amin'ny faharanitan-tsaina. Ny rehetra dia heverina fa tsy hifehezana feno ny mpiasa, fa noho ny antony tsara. Amazon dia te-hifehy ny mpiasa Noteren'ny mpamily Amazon hanao sonia taratasy ...
Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, hevitra
Jiro birao Yeelight V1 Pro - jiro tsara ho an'ny asa sy fitsaharana
homekit, jiro latabatra, fahazavana
Volavola mahaliana, jiro tsara ary fanamorana ny fampiasana. Ity no jiro birao Yeelight V1 Pro. Fitaovana marani-tsaina izay hanatsara ny fampiononana ny asa na hahatonga ny famakiana boky amin'ny hariva hahafinaritra tokoa ... Efa lasa nalaza tamin'ny ...
Amazon dia miasa amin'ny robot an-trano!
Nisy ny tsaho tao amin'ny Internet efa ela fa Amazon dia miasa amina tetikasa ho an'ny robot an-trano manan-tsaina manana ny anarany miasa hoe "Vesta". Na izany aza, nisy ny fivoahan'ny vaovao vaovao nametraka fanontaniana ho an'ny mpamokatra robot. Bebe kokoa etsy ambany! Na tsia ...
Fototra zaridaina Meross miaraka amin'ny WiFi! FAMERENANA
faladiany zaridaina, socket maranitra, meross
Hatreto, isaky ny mila mampifandray zavatra lava kokoa eo amin'ny lavarangana aho dia tsy maintsy mieritreritra mafy. Adhesive tape (tape adhesive be dia be) no nihetsika, ary ny fitsipika momba ny fahasalamana sy ny fiarovana dia voageja be. Tamin'ny farany anefa, tafita tamin'ny ...
Kitapo hazavana Meross - famerenana ny switch mety ho an'ny mpanampy
Amazon Alexa, Apple HomeKit, google home, homekit, meross, jiro resaka
Mahalana aho no manana fa ny fitaovana azoko dia miasa tsara amin'ireo mpanampy fototra rehetra. Nahagaga ahy izany i Meross. Raha mijery ity switch ity aho dia tsy nieritreritra afa-tsy momba ny HomeKit, ary hita fa mety tsara amin'ny ...
Alexa miaraka amin'ny endri-javatra vaovao!
Alexa, Amazon, vaovao
Mivoatra amin'ny lalana mahaliana izaitsizy ny teknolojia. Kofehy maro avy amin'ny sarimihetsika sci-fi no efa misy, hita fa ny faharanitan-tsaina artifisialy - Alexa amin'ny maha dokotera azy dia tranga hafa toa izany! Alexa dia hilaza aminao ny marina! Fehiloha marani-tsaina an'ny orinasa ...